Wararka - Hababka daabacaadda OEM/ODM Hoodie
OEM/ODM Hoodie hababka daabacaadda
Daabacaadda shaashaddahoodie waa habka loo maro daabacaadda hoodie-ka. Habkan caadiga ah waa mid firfircoon, waara, oo aad u jecel qof walba. Waxyaabo kale oo fiican ayaa ah inaad ku daabici karto dhar mugdi ah dhib malahan. Iyo ku dhawaad ​​nooc kasta oo dhar ah. Isweydaarsiga ayaa ah inaad bixiso midab kasta, oo dejinta kharashyada ayaa noqon kara mid aad u sarreeya haddii aad hesho socod yar. Markaa daabacadu ha noqoto mid sahlan. Burburka dhammaan faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka labada hab ee daabacaadda ugu sarreysa, ka fiiri boostadayda Daabacaadda Shaashadda vs DTG.
DTGhoodie ama toos-u-labbiska waa waxa la isticmaalo marka aad sameyneyso koofiyad yar, ama aad u baahan tahay inaad yeelato midab buuxa. Tayada daabacaaddu uma fiicna sida daabacaadda shaashadda, midabyaduna ma aha kuwo aad u firfircoon, laakiin waxaad si fudud u samayn kartaa hal xabbad oo leh qaansoroobaad, taas oo aan la awoodi karin iyadoo la isticmaalayo daabacaadda shaashadda. Maskaxda ku hay waa inaad la socotaa 100% suuf si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican, kana digtoonow inaad ku maydho biyo kulul iyo saabuunta adag haddii aad rabto inay sii jirto.
Wareejinta kuleylkahoodie waa habka loo adeegsado haddii aad rabto ganacsi bireed dhalaalaya oo dhalaalaya, ama marka aad leedahay naqshad midab-buuxa leh laakiin aadan awoodin inaad iska bixiso dhammaan midabada khadadka, mana isticmaali kartid DTG maxaa yeelay waxaad leedahay meel daabacan oo aan caadi ahayn . Maskaxda ku hay waxay ku abuureysaa dahaarka caag dhuuban oo dusha sare ah, taasoo meesha ka saareysa neefsashada, oo aakhirka dillaaci doonta oo burburin doonta - haddii aad aad ugu adag tahay ama aad marar badan dhaqdo. Dhab ahaantii waa dhejis la cadaadiyey.
Dheeh-sublimationhoodie waa habka loo sameeyo “daabacaad dhan-dhaaf ah” (ku dhawaad ​​dhammaadkeed). Tani sidoo kale waa ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay sameynta daabacaad midab-buuxa leh, sida naqshadda unicorn-ka meel sixir ah. Qof walba wuxuu leeyahay hal, sax? Dye-sub wuxuu la mid yahay wareejinta kuleylka laakiin wuxuu ku lug leeyahay falcelin kiimiko, ka boodida wejiga dareeraha marka la kululeeyo, oo isu rogaya gaas isku xira fiilooyinka. Waxay samaysaa daabacaad waarta, joogto ah, dhalaalaya oo ah “gacanta jilicsan”. Maskaxda ku hay in ay ku shaqayso oo keliya polyester. Markaa taasi waa taas.
Daabachoodie waa habka lagu ilaalin karo ama lagu astayn karo koofiyadahaaga tafaariiqda. Maskaxda ku hay in xirmooyinku ay la yimaadaan taageero dhinaca ka soo horjeeda ee marada oo aad ugu weyn dharka khafiifka ah ama waxoogaa aan raaxo lahayn meelaha isku dhaca (sida naasaha). Haddaba sida had iyo jeer, ka dhig naqshaddaada daabacaadda mid yar oo la fududeeyay. Laabta bidix waa meesha astaanta caadiga ah ee naqshadeynta ama naqshadeynta ay aadi doonto, laakiin dhowr tusaale oo meeleyn hal abuur leh ayaa ah curcurka ama cidhifka daboolka.
Sweatshirts & Hoodie, Tshirts & Tank dushooda, surwaal, tracksuitSoo -saaraha Qiimaha jumlada oo leh tayada Warshadda. Taageer laambadda Custom, Logo Custom, Qaabka On-Deman, midabka.
RFQ Fadlan La xiriir:
Lambarka taleefanka: +86 13677086710
Lambarka Telefoonka: 0086 0791 88176366
Waqtiga dhejinta: Apr-09-2021